Ajụjụ - Qingdao Otu ebe Machinery Co., Ltd
Ee, ma n'ihi na anyị na igwe na ngwaahịa. Dị nnọọ otu set bụ Ok. Ndị ka mma.
Ị nwere ike ime ka ugwo ka anyị akụ bu TT (Telegraph Nyefee), Western Union ma ọ bụ PayPal:
30% ego tupu, 70% itule tupu nnyefe.
Na na anyị na-anabata L / C ugwo.
Anyị akwụkwọ ikike anyị ihe na rụọ ya. Anyị nkwa bụ gị afọ ojuju na anyị na. Na akwụkwọ ikike ma ọ bụ, na ọ bụ omenala nke anyị ụlọ ọrụ iji lebara na-edozi ihe niile ahịa mbipụta ka onye ọ bụla mma. N'ihi na anyị na igwe ngwaahịa, ejikari na akwụkwọ ikike oge bụ ọnwa 13 si Mbupu ụbọchị. Na na ndụ oru nkwado ọrụ.
Ee, anyị na-eji elu àgwà mbupụ nkwakọ. The ngwongwo zụrụ-esi dum akpa ibu, anyị ga-Ibu Ibu igwe kpọmkwem n'ime akpa, ọma na-echebe na ofu na akpa.
Ọ bụrụ na ígwè ọrụ zụrụ ga-esi a zuru akpa ibu, anyị ga-atụle iji pụrụ iche mbupụ ngwugwu-fumigation free osisi igbe ga pallet isi.
The mbupu na-eri na-adabere na ụzọ ị na-ahọrọ na-ngwongwo. N'ihi obere ngwaahịa na-egosipụta bụ ejikari kasị quickest kamakwa kasị oké ọnụ ụzọ. Site seafreight bụ ihe ngwọta kasị mma n'ihi na nnukwu ichekwa. Kpọmkwem ibu udu anyị nwere ike na-enye gị ma ọ bụrụ na anyị maara nkọwa nke ego, arọ na ụzọ.
N'ihi na anyị na igwe ngwaahịa, dị nnọọ na-agwa anyị ihe mbupu ụzọ na ị chọrọ, ma ọ bụrụ na seafreight, agwa anyị na ị chọrọ FOB, CNF, ma ọ bụ CIF, mgbe ahụ anyị nwere ike ihota fi.